Somaliland oo ka soo horjeesatay in ay dowladda lagu wareejiyo maamulka hawada Soomaaliya
Maamulka Somaliland ayaa ka soo horjeestay qorshaha ay dowladda Soomaaliya ku damacsan tahay in ay kula soo wareego maamulka hawada Soomaaliya oo hadda laga maamulo magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya.
Wasiirka duulista hawada iyo gaadidka maamulka Somaliland Maxamuud Xaashi Cabdi oo saxaafadda kula hadlay Hargeysa Kaddib markii uu ka soo laabtay magaalada Nairobi ayuu sheegay in maamulkooda uusan oggolaan doonin in maamulka hawada Soomaaliya lagu wareejiyo dowladda fedaraalka Soomaaliya.
Wuxuu sheegay oo kale in maamulka Somaliland ay diyaar u yihiin in ay maamushaan hawadooda maadama ay yihiin dowlad sidda uu hadalka u dhigay.
Wasiirka ayaa carabka ku adkeeyay in maamulka Somaliland uu la mid yahay dalalka Taiwan iyo Falastiin oo maamusha hawadooda balse aqoonsi aan weli helin.
“Waxaan Nairobi anniga iyo wafdi culus aan kula soo kulanay beesha caalamka iyo QM oo waxaan u sheegnay in aysan khatar galin hawada Soomaaliya, waayo Somaliland waxaa ka go’an in ay hawadeeda si gaar ah u maamulato” ayuu yiri wasiirka duulista hawada iyo gaadidka cirka.
Wuxuu sheegay oo kale in Soomaaliya oo dhibaato muddo dheer ku jirtay in aysan haddana dhibaato kale gacanteeda ku sameesan.
Si kastaba, dowladda Soomaaliya ayaa dedaal xooggan ugu jirta siddii loogu soo wareejin lahaa maamulka hawada Soomaaliya.
Waxaa kaloo qorshaha dowladda horrey uga soo horjeestay maamulka Puntland, waana culeys kale oo ku soo furmay dowladda Soomaaliya.
Soomaaliya iyo Kenya oo Muqdisho ku geli doona heshiis cusub & iyo cabsi ka jirta…
Heshiis saddex geesood ah oo ay yeelanayaan dowladaha Soomaaliya, Kenya iyo Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Qaxootiga ayaa lagu wadaa in dhawaan lagu saxiixo magaalada Muqdisho.
Danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Maxamed Cali Nuur “Ameerika” ayaa sheegay in heshiiskaasi saddex geesoodka ah uu ka dhacayo gudaha magaalada Muqdisho, isagoo sidoo kale shaaca ka qaaday inay jiri doonaan heshiisyo ammaanka quseeya oo iyagana la qabanayo.
Danjiraha Soomaaliya ee dalka Kenya waxa uu sidoo kale xusay in dowladaha Kenya iyo Soomaaliya ay si weyn isu fahmeen arrimo bandanna isla meel dhigeen.
Dad badan ayaa shaki ka muujinaya heshiiskan cusub, ayaga oo aaminsan inaysan Kenya fulin doonin, maadaama Kenya ay horey uga baxday heshiisyadii hore.
Dhinaca kale, Danjiraha ayaa sheegay in dowladda Kenya ay si rasmi ah safaaradeeda uga furanayso magaalada Muqdisho, isagoo xusay in xafladda furitaanka safaaraddaasi ay ka soo qeyb geli doonaan mas’uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda Kenya oo ay horkacayaan madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya iyo wasiirka Arrimaha Dibadda ee dalkaas.
Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya ayaa safar qaatay afar maalmood ku tegay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, wuxuuna kulamo la qaatay madaxda dalkaas oo ay ka mid yihiin madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, wuxuuna Ra’isul mwasaaruhu dalka Kenya ku saxiixay heshiiska waddamada ACP oo ay Soomaaliya ka mid noqotay 25 sanno kaddib.
Dowladda oo Maamul cusub umagacawday Qoryooleey iyo Guddoomiyihii hore oo diiday wareejinta xilkaasi
Kadib markii shalay Magaalada Qoryooleey ee Gobalka Shabeelaha Hoose uu tagay Guddoomiyaha Gobalka Shabeelaha Hoose, C/qaadir Maxamed Nuur Siidii iyo Guddoomiyaha cusub ee Degmada Qoryooleey, ayaa Guddoomiyihii hore ee Degmada Qoryooleey Cusmaan Sheekh Cali Buraale, wuxuu diiday in xil ka qaadis lagu sameeyay.
C/qaadir Maxamed Nuur (Siidii) Guddoomiyaha Gobalka Shabeelaha Hoose, ayaa wuxuu sheegay in Wasaarada arimaha Gudaha Xukuumadda Soomaaliya ay maamul cusub umagacawday Degmada Qoryooleey, waxaana Guddoomiye looga dhigay Maxamed Xaaji Cusmaan Shig Shigow sida uu Siidii sheegay.
Guddoomiyihii Hore ee Degmada Qoryooleey Cusmaan Sheekh Cali Buraale, oo la hadlay Idaacada Risaala, ayaa wuxuu iska diiday inuu xilkaasi dhiibo, isaga oo ku doodaya in Guddoomiyaha cusub uu soo magacaabay C/qaadir Siidii, taasina uusan xaq ulaheyn.
Mr Buraale, ayaa sheegay in isaga uu yahay Guddoomiyaha Sharciga ee Degmada Qoryooleey, marka ay Wasaarada arimaha gudaha maamul soo magacawdana uu baneynayo booska uu hada joogo.
“Ninka hada la wado Siidii ayaa soo magacaabay mana yeelaayo aniga shacabka Degmada ayaa idoorteen Wasaarada arimaha gudahana wey ogtahay wuu yaala magaceyga”Ayuu yiri Guddoomiyihii hore ee Degmada Qoryooleey.
Wasaarada arimaha gudaha Soomaaliya weli kama aysan hadlin muranka ku aadan in Guddoomiyihii hore ee Degmada Qoryooleey uu diiday wareejinta xilkaasi.
Dadka Soomaalida ah ayaa ah kuwa jecel xilka, mana rabaan in laga bedelo xilka loo dhiibo, iyaga oo iska dhiga inay dhaxal oo kale u helaan xilka Dowladnimo ee shacabka loogu dhiibay.
Shariif Xuseen Rooboow “Waa qalad weyn in sirta ciidanka Warbaahinta laga sheego”
Iyadoo Dhawaan Afhayeenka Laamaha ammaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya Qaasim Axmed Rooble uu dhawaan Warbaahinta ka shaaciyay Gaadiid qaraxyo ay ku xiran yihiin iyo rag Al-Shabaab oo Magaalada Muqdisho ku jiro ayaa shaacinta Sirtaasi waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay Saraakiil hore oo ciidamada xooga dalka Soomaaliya horay uga tirsanaa.
Shariif Xuseen Rooboow oo kamid ahaa Saraakiishii hore ee ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed Dowladii dhexe, ayaa sheegay inaysan wanaagsaneyn in Xogta ciidanka iyo siraha ay helaan laamaha ammaanka laga shaaciyo Warbaahinta.
Wuxuu arin qaldan ku tilmaamay Sirtii dhawaan Afhayeenka laamaha ammaanka uu Warbaahinta ka sheegay, taasi oo uu sheegay in xubnaha la shaaciyay ay bedelanayaan sirta ku aadan qaraxyada iyo amnidarada ay ka geysan rabeen Magaalada Muqdisho.
Sarkaalkaan hore ayaa sidoo kale sheegay in haba yaraatee sugidda ammaanka aysan qeyb ka aheyn in Qorshooyink laamaha ammaanka la sheeg-sheego ayna ku wanaagsan tahay kaliya in sirta ciidanka ay isku gudbiyaan Saraakiisha.
Dhanka kale waxa uu ka hadlay Shariif Xuseen Rooboow sababta Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ugu cel-celinayso inay adkeynayso ammaanka Magaalada Muqdisho, isaga oo sheegay in mar waliba Dowladda Federaalka Soomaaliya ay masuul ka tahay sugidda ammaanka Magaalada Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya ayaa maalmahan dhan waxa ay ku faaneysay inay xaqiijinayso ammaanka Magaalada Muqdisho, waxa ayna Dowladda soo bandhigtay Barnaamij loogu magacdaray “Nabad ku afur” oo ah Barnaamij amni.
Shalay oo Bisha Ramadaan 1-aheyd ayaa Muqdisho waxaa lagu dilay ku dhawaad afar askari oo labo kamid ah lagu dilay wadada mashquulka badan ee Maka Al-Mukarama, iyadoo ragii dilayna ay baxsadeen.
Waalidiinta Dhalay Dhalinyarada Al-Shabaab ku jira oo Digniin iyo Hanjabaad loo diray
Guddoomiyaha Maxkamada sare ee ciidamada qalabka sida Dowladda Federaalka Soomaaliya C/raxmaan Maxamuud Tuur-yare ayaa Hanjabaad udiray Xubnaha ku jira Ururka Al-Shabaab ee ku sugan Magaalada Muqdisho, kuwaasi oo uu sheegay in Bisha Ramadaan ay qorsheynayaan weeraro ay ka geystaan Muqdisho.
C/raxmaan Tuur-yare ayaa wuxuu sheegay in Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab inay doonayaan weeraro inay ka geystaan Magaalada Muqdisho, laakiin wuxuu sheegay in qofkii Shabaab ka tirsan oo Hay’adaha amniga ay qabtaan, kadibna ay ku cadaato inuu Shabaab yahay inaan la cafin doonin.
Guddoomiye Tuur-yare ayaa waxaa uu sheegay in waalidiinta dhalay dhalinyarada la qalday ee kamidka ah Al-Shabaab inay u soo sheegaan hay’adaha amniga Soomaaliya si dabagal loogu sameeyo, hadii kale talaabo sharci ah laga qaadi doono Waalidiinta.
“Waalidkii ogaa in wiilkiisa ama gabadhiisa ay ka mid noqdeen Al-Shabaab u soo gudbi hay’adaha amniga, si loo daba galo, hadana daba socda dambiilihii dambigaasi wax buu ku leehayay, marka inta ay goori goor tahay wargeli hay’adaha amni ee kugu dhaw” ayuu hadalkiisa ku soo gabo gabeeyay Gaashaanle sare Cabdiraxmaan Tuuryare.
Tan iyo markii xilkaan loo magacaabay C/raxmaan Tuur-yare wuxuu hanjabaado kala duwan oo isdaba joog ah udiraye Dhalinyarada Al-Shabaab ka tirsan ee Muqdisho iyo Gobalada dalka ku sugan.
Shabaabka hubaysan ee Dowladda kasoo horjeeda ayaan dhaq-jalaq usiin Hanjabaadaha kasoo yeeraya Saraakiisha ciidamada Dowladda iyo masuuliyiinta Maxkamadaha ciidamada.
Hadalkaan ayuu C/raxmaan Tuur-yare Guddoomiyaha maxkamada sare ee ciidamada wuxuu ka jeediyay shalay Xabsiga dhexe ee Magaalada Muqdisho oo lagu xukumay rag lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dil loo geystay gabar adayad aheyd oo lagu magacaabi jiray Nafiso Salaad Cusmaan.
Al-shabaab oo ka naxsaday ciidamada DF ee ka howlgalada wadooyinka Muqdisho
Afhayeenka Ciidamada Ururka Al Shabaab Sheekh C/casiis Abuu Muscab, ayaa waxa uu ku faanay inay iyagu geysteen dilalka dhowr ka mid ah Ciidanka Dowladda, oo Axadii ka dhacay Magaalada Muqdisho.
Afhayeenka wuxuu sheegay hawlgalo ay qaadeen dagaal-yahanada Shabaabka in lagu dilay 3 ka mid ah Ciidamada Dowladda, iyadoo laba ka mid ah ay ku dileen sida uu sheegay Jidka Dabka, halka midka kalana ay ku dileen Xaafada Suuqa Xoolaha.
Sheekh C/casiis Abuu Muscab ma sheegan Masuuliyada askari 4-aad oo lagu dilay Wadada Ifka Xalane, xilli la sheegay in uu afur ka soo iibsanaayay Bibito ku taal dhinaca Xero Jarmal.
Dhanka kale Sheekh C/casiis Abuu Muscab, ayaa waxa uu Ciidamada Dowladda u jeediyay inay ka taggaan Wadooyinka Magaalada Muqdisho, oo loo wakiishay inay ka hawlgalaan maalmaha Ramadaanka.
Wuxuu ku faanay inaysan ka hortaggi karin Ciidamada Ururka Al Shabaab, waxa uuna kaga digay in siyaabooyin kala duwan loogu beegsado Wadooyinka ay ka hawlgalayaan.
Sidoo kale waxa uu soo hadalqaaday in maalmahaan dambe ay Madaxda Dowladdu ka hadlayeen Warbaahinta, iyagoo muujinaaya in la adkeeyay ammaanka Caasimada, ha yeeshee wuxuu Abu Muscab xusay inaysan is ilaalin karin.
Al Shabaab, ayaa waxaa lagu eedeeyay in bisha barakeysan ee Ramadaan, ay u caaboon tahay inay disho dad badan oo Muslimiin ah, gaar ahaan Ummada Somaliyeed.
Kismaayo oo war cusub laga soo sheegay!
Wararka naga soo gaarayo Magaalada Kismaayo, ayaa sheegaya in Maqaayadaha ku yaalo halkaasi aan weli lagu amrin in la xiro, iyadoona lagu arkaayay Rag iyo dumar si caadi ah uga cunteynaayay.
Inta badan ayaa waxaa ka cunteynaayay Saraakiil Ciidan iyo Mas’uuliyiin ka tirsanaa MKG Jubba, kuwaasi oo aan la garaneynin mowqifkooda ku aadan Soonka, iyadoona aan weli Milkiilayaasha maqaayadaha lagu amrin inay xiraan.
Kismaayo, ayaa waxaa ku yaalo Maqaayado u badan bush kuwaasi oo ay ku ganacsadaan Dumar iyagu tabaaleysan waxaana ka cunteeyo badi Askarta MKG kuwaasi oo fududeysta ka iibsashada Raashiinka Maqaayadahaasi yar.
Dhanka kale, waxaa jiro Maqaayado ay iska xireen ganacsatadii laheyn xiliyada Subixii, halka Maqaayadaha qaarna ay caadi u iibinayaan Raashiinka, taasi oo shaki galisay Culimada qaar, mana jiro hadal ku aadan arrinkaasi oo kasoo baxay MKG.
Ra’iisul wasaare C/weli Sheekh oo arin culus ka hadlay
Howlgalo culus oo ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ka wadaan degmada Dharkeenleey ee Muqdisho
Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa saaka howlgalo guri guri ah waxa ay ka wadaan Degmada Dharkiinleey ee Gobalka Banaadir oo saaka aroortii ay ku jarmaadeen ciidamada.
Howlgalkaan ayaa waxaa sida la sheegay fulinaya ciidamada Booliiska Soomaaliyeed oo kaliya mana jirto ciidamo Amisom ah oo howlgalka ku wehlinaya sida horay looga bartay ciidamada marka ay howlgalada sameyn jireen, waxaa wehlin jiray ciidamada Amisom.
Guryo kamid ah kuwa Xaafadaha Degmada Dharkiinleey ayeey ciidamada galeen, waxaana ay halkaasi kasoo saarayeen dhalinyaro badan, kuwaasi oo la isugu geeyay Saldhiga Degmada Dharkiinleey, sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka.
Howlgalkaan ay ciidamada saaka ka wadaan Xaafadaha Degmada Dharkiinleey ayaa waxa uu qeyb ka yahay qorshaha sugidda ammaanka Magaalada Muqdisho, xilli Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku jirto feejignaan badan oo ku aadan ammaanka Magaalada Muqdisho.
Saraakiisha ciidamada Booliiska Soomaaliyeed ee hogaaminaya howlgalkaan weli kama aaney hadlin, sidoo kalena lama oga tiro rasmi ah oo lagu soo qabtay howlgalka.
Al-Shabaab ayaa waxa ay ku goodiyeen inay Magaalada Muqdisho ka geysan doonaan weeraro culus, sida uu sheegay Sheekh Cali Jabal oo ah Wakiilka Al-Shabaab ee Gobalka Banaadir, isaga oo intaasi raaciyay in ciidamada Dowladda aysan awood ulaheyn xaqiijinta ammaanka Magaalada Muqdisho.
Dadka reer Muqdisho ayaa muujinaya dareen badan oo ku aadan ammaanka caasimada, maadaama Warbaahinta ay ka maqlayaan goodiska Al-Shabaab iyo jawaab celinta Dowladda kasoo yeeraysa.
Wararkii ugu dambeeyay dagaalo culus oo ka dhacay deegaano ka mid ah Shabeelaha Hoose
Dagaalo dhowr jiho leh, ayaa waxay xalay ka dhaceen qaybo ka mid ah Gobolka Shabeellaha Hoose, iyadoo weeraradaan lala beegsaday fariisimaha Ciidanka Amisom ku lee yihiin Gobolka.
Xoogag hubeysan, ayaa weerar kulul ku qaaday fariisimaha Xoogaga Amisom ku lee yihiin afaafka hore ee Magaalada Marka, iyadoo hubka culus lagu garaacay fariisimaha Amisom.
Mid ka mid ah dadka degan Magaalada Marka, ayaa ku waramaaya in Ciidanka Amisom uu hujuum xoogan kaga yimaaday Xoogag loo fishay inay ka tirsan yihiin mintidiinta Shabaabka.
Sidoo kale waxaa la weeraray fariisimaha Ciidamada Amisom ku lee yihiin Ceel Saliini, oo dadka qaarkii ay u garanayaan Ceel Salaaxudiin, halkaasoo ay kula dagaalameen Xoogag hubeysan.
Weerar kale, ayaa waxaa lagu qaaday fariisimaha Ciidanka Amisom ku lee yihiin Deegaanka Lafoole ee duleedka Degmada Afgooye, wuxuuna weerarkaasi daba socday kuwii kale ee lagu qaaday fariisimaha Amisom.
Ciidanka Amisom ee degan Lafoole, ayaa hubka waaweyn u riday goobihii ay weerarada ka soo qaadeen dagaal-yahanada Ururka Al Shabaab, waxayna baqdin geliyeen dadka Deegaanka.
Faah faahin badan lagama haayo khasaaraha ka dhashay weerarada lagu qaaday fariisimaha Ciidanka Amisom ku lee yihiin qaybo ka mid ah Gobolka Shabeellaha Hoose, mana jirto cid u kala hadashay labada dhinac.
Weeraradaan, ayaa u muuqday kuwo ay Shabaabku ku kowsanayaan bilashada bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoo dadku walaac xoogan ka muujinayaan suurta galnimada weeraro abaabulan, oo ay Shabaabku geystaan inta lagu guda jiro bisha ugu Kheyrka badan.
Ahlu Sunna oo dareen ka muujisay weeraro kaga yimaada Xoogaga Al Shabaab
Ahlu Sunada Gobolada Koonfureed, ayaa waxay xilligaan dareen ka muujineysaa weeraro kaga yimaada dhinaca Ururka Al Shabaab, oo la rumeysan yahay inay mabda’ ahaan isku hayaan.
Sheekh Isxaaq Xuseen Mursal (Geesa-dheere) oo ka tirsan Saraakiisha sar sare ee Ahlu Sunada Gobolada Koonfureed, ayaa waxa uu sheegay in Shabaabku ku hanjabayaan inay bisha Ramadaan weerari doonaan, dhinacyada ka soo horjeeda oo idil.
Sheekh Isxaaq Xuseen Mursal, ayaa waxa uu tilmaamay inay u diyaar garoobeen si adag oo ay u caabiyaan Shabaabka, haddii ayba dhacdo inay soo weeraraan Deegaanada, ay ka arrimiso Ahlu Sunada Gobolada Koonfureed.
Sidoo kale wuxuu sheegay inay dharbaaxsho daran u geysan doonaan dagaal-yahanada Ururka Al Shabaab, goor kasta oo ayba dhacdo inay ku soo xadgudbaan Deegaanadooda, sida uu yiri.
Waxa uu intaa ku daray inaysan Shabaabku lahayn awood buuran oo baqdin looga muujin karo, isagoo su’aal iska weydiiyay inay Shabaabku yeelan doonaan awood ka badan. bacdamaa ay ku ogaayeen mid itaal daran, sida uu yiri.
Geesa-dheere oo siyaabooyin kala duwan ula hadlay tiro Idaacado ah, ayaa waxa uu carabka ku adkeeyay inay ka dhursugayaan Shabaab oo kaliya, weeraro ay ku soo qaadaan meelaha ay ku sugan yihiin, mar haddii ay curatay bishii Ramadaan.
Shacabka, ayaa waxay walaac xoogan ka muujinayaan suurta galnimada weeraro abaabulan, oo ay Shabaabku geystaan mudada lagu guda jiro bisha ugu Kheyrka badan.
War ka cusub heshiis la sheegay inay P/L ka dhex waddo Barre iyo Madoobe
Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose waxaa muddo toddobaada ku sugnaa wafdi uu hoggaaminaya wasiirka caddaaladda Puntland, Ismaaciil Maxamed Warsame.
Wasiirka caddaaladda Puntland Ismaaciil Maxamed Warsame oo wafdigaasi hoggaaminaya ayaa beeniyay inay wadaan qorshe lagu heshiisiinayo Axmed Madoobe oo ah hoggamiyaha maamulka kumeel gaarkaa ee Jubba iyo Col. Barre aadan shire Bare Hiiraale oo horay ugu dagaalamay magaalada Kismaayo.
“Warka annigu xog kama hayo waxaan si kooban u leeyahay warkaa ma jiro, annagana howlo dhameystir shaqaaqoyin Kismaayo ka dhacay baan u jogna, eeuma joogo heshiisiinta Madoobe iyo Barre” ayuu yiri wasiirka caddaaladda Puntland Ismaaciil Maxamed Warsame.
Ismaaciil, ayaa intaas ku daray in Puntland aysan xittaa ku fakarin inay sameyso dadaallada ceynkaas ah.
Puntland, ayaa la rumeysan yahay inay tahay mid ka id ah caqabadaha ka jira Jubbooyinka, ayada oo Col. Barre uu horey ugu eedeeyey inay colaad ka hurineyso gobolladaas.
Waftigan ka socda Puntland waxaa lugu wadda inay maanta la kulmaan madaxweynaha maamulka Jubba,Sheekh Axmed Madoobe oo ay kala hadli doonan xoojinta wada-shaqeynta Puntland iyo Jubba.
Xildhibaanno ka tirsan baarlamanka Soomaaliya, oo dhowr ah ayaa billaabay qorshe la doonayo in xildhibaanada beelaha Daarood ay uga baxaan magaalada Muqdisho, ee caasimada Soomaaliya.
Ilo xog ogaal ah ayaa sheegay in Jurille uu qorshahan billaabay kadib markii xildhibaanada beelaha Hawiye iyo wasiiradooda ay qaadaceen dowladda, taasi oo keentay in baarlamanka uu muddo ku dhow toddobaad kulmi la’ yahay.
Siyaasiyiin ka tirsan beelaha Hawiye ayaa sheegay in qorshaha Jurille ee ah in dowladda laga raro Muqdisho uu yahay mid farxad gelin lahaa, haddiiba taasi ay dhacdo, sababta oo ah dowladda oo wax aan culees ahayn ku hayn deegaanada beelaha Hawiye.
War laga naxo oo laga soo sheegay B/weyne & Shacabka oo halis ugu jira in magaalada ay ka…
Wararka aan ka helayno magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in halkaasi lagu dilay nin macalin ahaa oo ka shaqeynayay iskuul iyo jaamacad ku taala magaaladaasi.
Wararka ayaa sheegaya in Macalinka lagu magacaabi jiray Sheikh Cabdi Satan kooxo hubeysan ay ku dileen bartamaha magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, iyadoo dadkii dilka geystay ay goobta ka baxsadeen.
Lama oga sababta ka dambeysay dilka macalinka iyo kooxaha ka dambeeyay dilkiisa, laakiin Alshabaab ayaa marar badan weeraro ka geystay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan.
Wararka dilka la xiriira ayaa sheegaya in kooxaha hubeysan macalinka oo wax ka dhigi jiray dugsiga Sheikh Maxamuud Macalin iyo Jaamaca Hiiraan ay ku dileen meel ku dhow xaafadiisa.
Waxaa dadka deegaanka ay sheegeen in uu kasoo baxay salaada cishaha uuna kusii jeeday xaafadiisa oo ku taala meel ku dhow xaafadiisa.
Masuuliyiinta maamulka degmada ayaa sheegay inay wadaan baaritaano amaanka ku aadan ayna dib ka faahfaahin doonaan waxyaabaha ay ku ogaadaan baaritaanada ay sameynayaan.
Faysal Cali Waraabe oo DF war cusub u sheegay
Siyaaga Reer Somaliland Faysal Cali Waraabe ayaa dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxa uu sheegay war cusub kuna saabsan siyaasadda dalka.
Waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya looga baahan yahay hadii ay wasiiro ka dhigaayaan rag kasoo jeeda gobalada Waqooyi, inay xilal u dhiibaan dad la yaqaano.
“Dad la yaqaano ayaa laga doonayaa dowladda Federaalka ah inay xilal u dhiibto, maxaa yeelay waqooyina wey leedahay, dad aan la aqoonna meesha waa ay keeneen”
Waraabe ayaa sheegay dhanka kale in laga yaabo inuu miro aan wanaagsaneen kasoo baxo shirarka kala duwan ee u soconaaya Somaliland iyo dowladda Federaalka ah, waa sida uu hadalka u dhigaye.
XOG:- Axmed Madoobe xilligee ayuu DF ku wareejinayaa Dekada iyo Garoonka Kismaayo?
Hogaamiyaha maamulka KMG ee Jubba Sheekh Axmed Madoobe ayaa ilaa hadda ka dhabeen heshiiskii ay wada gaareen dowladda Federaalka ee Soomaaliya.
Garoonka iyo dekada Magaalada Kismaayo waxaa lagu balansanaa in la wareejiyo, hase ahaatee ilaa hadda wax ka dhaqan galay malahan.
Shabakada Alldhacdo ayaa ogaatay xog ku saabsan xilliga hadda uu doonaayo Axmed Madoobe in DF ay maamusho goobahaasi muhiimka ah.
Waxaa la qorsheeyay ka dib markii cadaadis uu ka yimid dhanka beesha caalamka in la wareejiyo sanadka cusub ee soo socda waa 2015.
Saraakiil ku dhaw Axmed Madoobe ayaa inoo sheegay in hadda qorshahaan la wado, hase ahaatee lama oga sida ay ku dhaqan geli doonto.
Soomaaliya iyo Qabiil oo sheeko cusub dhex martay (MAXAA KALA QABSADAY)
Waxaad bilooyin kahor shabakada Alldhacdo aad ka daalacateen sheeko xiiso badan oo dhex martay Qabiil iyo Soomaaliya, xilli markaasi Jamhuuriyadda Soomaaliya uu kobac kasoo muuqanaayay.
Hase ahaatee dib waxaa usoo laba kacleeyay Qabiil oo meelo badan soo maray, waxaana uu u yimid Jamhuuriyadda Soomaaliya, sheekadaan ayaana dhex Martay.
Qabiil:- Soomaaliya Seetahay?
Soomaaliya:- Kan ayaanba nacay oo aan jiifsan la ahay
Qabiil:- Maxaad hoos ugu ganuunacaysaa, waxaanse ku weydiinaa maxaad wejiga iigu bedashaa marka aad i aragto?
Soomaaliya:- Adiga cid kuu faraxdaa maba jirto, maxaa yeelay mashaqada aad igu hayso ayaan ka joogi waayay.
Qabiil:- War aan kusiiyo, aniga dadkaagii mar kale ayaan madaxa ka galay, gobalada oo dhan waan ku faafay, dad badanna waan isku dilay, dhiigu ha qubto
Soomaaliya:- Dadkeyga adiga oo qaawan waxba kama tareyside, balse waxaan u maleeyaa in balaayo kale aad kaashatay.
Qabiil:- War wuxu caqli badanaa, waa runtaa, kaligeey waxba ma tari lahaynee, laakiinse waxaan kaashaday wax lagu sheegay Federaal oo aanba u arkay meesha aan dadka ka hagi karo inay tahay.
Soomaaliya:- Dadkeyga maalin aan maanta ahayn ayeey ku ogaan doonaan inaad dhib nagu wado,
Qabiil:- Maxamed Siyaad xeeladii lagula dagaalay anaa keenay, dadka anaa hor boodaayay, hadana waxaan awoodaa in dagaalka Soomaaliya aan ku haayay 24-ka sano inaan sii wado.
Soomaaliya:- Waa sida aad jeceshay, waxaad lunsataa oo kaliya dadka aan waxba ogeyn, hadda nabad ayaan helayaa, dadkeyga badi aqoonyahano ayeey noqdeen, dadkii dibadaha iga jirayna wey imaanayaan.
Al-shabaab oo aad ugu fashilan arin uu caadeestay in Muqdisho ka sameeyo
Kooxda Al-shabaab ayaa waxa ay caadeesteen in Ramadaan walba ay magaalada Muqdisho ka sameeyaan falal dadka ay ka argagaxaan sida dilal iyo qaraxyo.
Hadaba Bishaan waxay u muuqataa mid taasi ay ku fashilmayaan, sababto oo ah dowladda Federaalka ayaa fahamtay keentayna qorshe cusub.
Meel walba oo magaalada ah waxaa ku daadsan Askar, hadii ay xaafadaha ama Laamiyada ahaan lahaayeen, waxaana taasi kasii daran shacabka oo ciidamada aad ula shaqeynaayaan.
Qaar ka mid ah shacabka ayaa u sheegay Alldhacdo inay go’aan ku gaareen sidii ay ku heli lahaayeen nabadda ayna kusoo sheegi lahaayeen cid walba oo ay u arkaan inay caqabad tahay.
Ciidamada DFS oo weji cusub lasoo baxay
Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa lasoo baxay wejiyo cusub kana bedalan kuwii horay loogu yaqaanay, waxaana taasi u riyaaqay dad aad u badan.
Magaalada Muqdisho waxaa lagu soo daadiyay ciidamo aad u badan, kuwaa oo ay ugu horeeyaan ciidamada Nabad ku Afura oo dowladda ugu tala gashay in shacabkeeda aysan wax dhibaato ah la kulmin.
Ciidamadaan waxay yihiin heegan habeen iyo maalin, waxaana ay la dagaalamayaa Maleeshiyaadka Al-shabaab ee dagaalama xilliga umadda cibaadada ku jirto.
Waxay ciidamadana lasoo baxeen wejiyo ka duwan sidii hore sida, fur furnaan, daacadnimo, la dhaqan Bulsho iyo soo dhaweyn.
Shacabka Muqdisho waxay kuu sheegayaan in dowladda ay lasoo daahday ciidamadaan loogana baahnaa in xilli hore ay keenaan.
Siyaasiin caan ka ah dalka oo wada Olole dib Madaxweyne looga dhigaayo Shariif Sheekh Axmed
Warar ay si hoose u heshay Shabakada Jornalizem ayaa waxay sheegayaan in siyaasiin caan ka ah dalka ay wadaan qorshe balaaran oo la doonaayo in dalka dib Madaxweyne looga dhigo Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Siyaasiintaan oo qaarkood si hoose ula hadlay Jornalizem, islamarkaana ka gaabsaday magacooda ayaa sheegay in uu jiro hami aad u balaaran kuna saabsan in wax badan ay hadda dalka ka bedalaan.
Dalalka aadka u daneeya Soomaaliya ayeey sheegeen inay ka dhaadhiciyeen sidii ay Sheekh Shariif usoo celin lahaayeen, maadaama uu u muuqdo nin umadda Soomaaliyeed wax u qabtay.
Hadda waxaa talada dalka Haaya Xasan Sheekh Maxamuud, waxaa u haray Laba Sano, waxaana dadka siyaasadda dalka falanqeeya ay sheegayaan in laga yaabo inaan waxba soo kordhin mudada u hartay.
XOG MUHIIM AH:- Shariif Xasan Sheekh Aadan oo wada qorshe culus (AKHRISO)
Gudoomiyahii hore ee Baarlamaankii KMG ahaa Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa wada qorshe culus islamarkaana uu ku doonaayo in wax badan uu ku daba gediyo.
Shariif Xasan oo walaalkiisa Madaxweyne ka yahay maamulka K/galbeed ee Sedaxda ah ayaa marka hore ku guuleestay in maamulkaasi DF uu ka helo aqoonsi buuxa.
Sidoo kale waxaa la sheegayaa in hadda uu wado qorshe uu ku kala fur furaayo mas’uuliyiinta maamulka Shabelle State, maadaama gobalka Shabeelaha Hoose dood ay ka taagan tahay.
Warar madax banaan waxay sheegayaan in uu la kulmay qaar ka mid ah mas’uuliyiinta maamulkaasi, islamarkaana uu ka dhaadhicinaayo inay iska daayaan gobalka Shabeelaha Hoose.
Shariif Xasan Sheekh Aadan waa shaqsi ku caan ah ged gedinta siyaasadda guud ee dalka, waxaana uu wax lasoo qeybsaday rag aad siyaasadda dalka caan ugu ah.
Madaxweyne Hore oo shacabka Soomaaliyeed tusay wadada ay ku heli karaan nabadda iyo kala dambeenta
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya C/qaasim Salaad Xasan ayaa shacabka Soomaaliyeed tusay wadada kaliya ee ay ku heli karaan nabadda iyo kala dambeenta dalka.
Isaga oo dalka Masar ku sugan ayuu sheegay in shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay marka hore in Allaha ay Baryaan islamarkaana ay is cafiyaan, ka dibna ay wax qabsasho u istaagaan.
“In Allaha la baryo, la’is cafiyo, la midoobo kaliya ayaa looga bixi karaa dhibaatada haatan ka taagan dalka, waxaana umadda Soomaaliyeed looga baahan yahay in hadda ay dalka nabadiisa usoo istaagaan”
Shacabka Soomaaliyeed ilaa hadda iskuma duubna, waxaana dhexdooda ka abuuran is faham waa ilaa hadda aan xal loo helin.
XOG:- Axmed Godane iyo Mukhtaar Rooboow oo isku hanjabay ka dib markii..
Warar ay si hoose u heshay Shabakada Jornalizem ayaa waxay sheegayaan inay isku hanjabeen Afhayeenkii hore Al-shabaab Mukhtaar Rooboow Abuu Mansuur iyo sidoo kale hogaamiyaha xilligaan ee kooxdaasi Axmed Godane.
Godane ayaa doonaya in Al-shabaab Ramadaanka ay sameeyaan weeraro xoogan oo meel walba ah, waxaase taa ka horyimid Rooboow, oo diidan in Baydhaba la weeraro.
Waxa uu u sheegay in wax weerar ah aan laga geysan Karin magaalada Baydhaba, sababtu waxa uu ku sheegay in Reer Baydhaba ay yihiin dad daacad ah waa sid uu hadalka u dhigaye.
Sheekada oo qaab qabiil isku bedashay ayaa xaajada sii xumeysay, waxaana laga baqanaayaa in dagaal uu ka dhex qarxo Labadaan dhinac.
Jeneraal Fartaag “Qabiilka aan ka dhashay xitaa haduu Jubaland diido dagaal ayaan la gala”
Madaxweyne ku xigeenka maamulka KMG ee Jubba Jeneraalka Fartaag ayaa sheegay in ay la dagaalami doonaan cid walba oo maamulkooda kasoo horjeeda qabiilka ay rabaan ha sheegteene.
Waxa uu sheegay in xitaa hadii Beesha uu isaga kasoo jeedo ay diidaan maamulkiisa uu diyaar u yahay dagaalkaasi inuu isagu hogaamiyo, laakiinse waxa uu sheegay in Beeshiis ay kow ka tahay waxa taageeraaya maamulkaasi.
“Qabiilka aan ka dhashay xitaa haduu Jubaland diido dagaal ayaan la gala, waxan rabnaa in maamulkaan aan gaarsiino meelo badan oo gobalada loo aas aasay ah, cid aan mucaarad ka yeelayno ma jirto, mucaaradka hadii uu yahay mid siyaasad caadi ah oo maamulka lagu canaanaayo ma diidayno laakiinse Midka Barre haduu yahay dagaal waa lama huraan”
Fartaag ayaa ugu dambeen ugu baaqay siyaasiinta iyo shacabka Jubooyinka iyo Gedo inay u midoobaan sidii ay ula dagaalami lahaayeen cadowgooda walibana taageero buuxda u siin lahaayeen Jubaland.